Vokatry ny fandoroana ny fako teny an-toerana nataon’olona miisa telo no nahatonga izany raha araka ny fanazavan’ny SAMVA, antony nanosika azy ireo hiala tsiny tamin’ireo mponina voakasika. Nanao izay ho afany koa ny SAMVA tamin’ny famonoana ny afo. Tonga nanolo-tanana azy ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana ka vetivety ihany dia voafehy ny afo. Ireo olona telo tratra kosa moa efa notazonina ary nanaovana fanadihadiana, raha ny loharanom-baovao azo. Tsiahivina fa ireo fako amin’ny daban-jaoridira avy any anaty tanàna raofin’ny kamiao lehibe isan-kariva no hariana eny Andralanitra. Ny SAMVA ihany no mikarakara ny famotehana azy ireny fa tsy ilana olona mpandoro avy any ivelany tahaka izao.